चित्रहरु सृष्टिको इतिहास र विवरण Vasileva "भिजेको Meadow"
वेब एक असामान्य र हृदयस्पर्शी छ। विशेष गरी स्पष्ट हामी चित्रकला Vasilyeva "भिजेको Meadow" को विवरण सुरु, तपाईं के सिर्जना, समय एकदम बिट बाँच्न सक्ने जवान कलाकार, थाहा छ भने, यो महसुस ... त्यसैले।
यो सबै रोग सुरु। "टीबी" - 1870 मा, कलाकार Fyodor Vasilyev धेरै एक चिसो र डाक्टर को निदान समयमा उहाँलाई डरलाग्दो राखे। उहाँले तुरून्त, दूर oppressing उत्तरी जलवायु देखि क्रिमीआ जान आवश्यक छ। तर, प्रायद्वीप छैन प्रभावशाली कलाकार र क्राइमन परिदृश्य उहाँलाई नराम्ररी बाहिर काम छ। धेरै निर्माता नलागेकोगोली स्मृति तिनीहरूलाई शाब्दिक कब्जा गर्न परिदृश्य बाँकी ... अनि यहाँ उनको टाउको मा आउँछ विचार। धेरै रेखाचित्र आधारमा उहाँले पूर्ण कृति सिर्जना गर्छ।
विषय र संरचना
छवि एक विस्तृत विश्लेषण - पहिलो वस्तु, को चित्रकला Vasilyeva "भिजेको Meadow" को विवरण असर पर्छ जो। ग्रेड 8 पहिले नै सौंदर्य स्वाद र कलात्मक फ्लेयर को एक महान गहिराई आवश्यक छ। त्यसैले, क्यानभासमा मा हामी एक स्नान संग छर्कियो एक Meadow, हेर्नुहोस्। केही रूखहरू, पृष्ठभूमिमा स्थित - - उत्तरी मा विरल वनस्पति तपाईं पनि "Boiling" आकाश भन्न सक्छौं, आँधी छ। शिखर आँधी भन्दा जस्तो देखिन्छ, तर वर्षा अझै माथि छैन।
क्यानभासमा हाम्रो ध्यान स्पर्श गर्न साथ उज्ज्वल रंग वा तस्बिरहरू घटनाहरू स्केल। तर यो साथीहरूको गर्न आवश्यक छ - र हामी आफ्नो शानदार विवरण, यसको विशेष गतिशीलता को उत्पादन भनेर बुझ्न। यो पनि चित्रकला "भिजेको Meadow" Vasiliev विवरण खातामा लिनुपर्छ। वास्तवमा, सबै तस्वीर - तत्व को एक लगातार संघर्ष। यो विशेष गरी वेब को एक ठूलो भाग ओगटेको जो आकाश, मा देखिन्छ।
विवरण तस्वीर Vasilyeva "भिजेको Meadow" स्पर्श गर्नुपर्छ र यसको निर्माण। को ढलान, सुनको बिन्दु - चित्रहरु को compositional केन्द्र दुई रूखहरू, फैलिएको यी अदृश्य सूत्रहरू तस्विर मा केंद्रित। यो एक प्राकृतिक क्यानभास दिन्छ, र पनि नेत्रहीन स्पेस बढाउँछ: यो सही पारी ब्लेड केन्द्र आकस्मिक छैन जान्छ। उत्तरार्द्ध कलाकार यसको प्रभावशाली inclusiveness परिदृश्य पकड गर्न अनुमति: यहाँ र Meadow sprawling, र बस अनन्त आकाश। यो पनि तस्विर एफ ए Vasileva "भिजेको Meadow" को विवरण सिर्जना गर्ने, छलफल हुनुपर्छ।
स्वर्गीय सतह दुई आधा विभाजित छ, र तिनीहरूलाई बीच Dividing लाइन, एकदम स्पष्ट देखेको। पहिलो दोस्रो सूर्य शक्ति पहिले देखि नै छ, र - एक गाढा, लगभग कालो - अझै पनि बादल समावेश गर्दछ। चाँडै तिनीहरूले दूरी देख्न वर्षा वन पूरा, मा सेल हुनेछ। पानी मा मिरर आकाश को दुई पक्ष - गाढा र हल्का दुवै। यो सबै, एक तस्वीर धारण यसलाई भंग अलग, प्रत्येक अन्य विवरण गर्न असम्बन्धित केही देखाइएको छैन। तपाईं चित्रकला "भिजेको Meadow" Vasiliev को विवरण लेख्न प्रयास भने लगभग, यस्तो निष्कर्ष आउँछन्।
तर, कुनै पनि बाह्य साथै प्रतिभाशाली वेब, Pictorial पक्ष अझै पनि भित्र छ। अर्को शब्दमा, त्यहाँ सधैं म सार्वजनिक निर्माता बताउन चाहन्थे कि प्रश्न छ? प्रकाश र अँध्यारो, शान्त, निर्मल र छालहरू, दंगे, बिजुली - यो मामला मा कलाकार यसलाई दुई तत्व, दुई तत्व मा परिदृश्य को अप्रत्याशित प्रकृति, लडाई स्थान्तरण। यो क्यानभास चरम यथार्थवाद दिन्छ; यो एक सानो बिट बढी देखिन्छ - र तपाईंले कुन सधैं वर्षा, वा हृदयस्पर्शी थोपाहरूद्वारा पछि आउँछ ओजोन को गन्ध, एक सानो सुन्दर, महसुस हुनेछ। यस्तो विचार तस्विर Vasileva "भिजेको Meadow" को विवरण पूरा गर्न आवश्यक छ।
तर यो अन्त छैन। समकालीनहरूको यी कुराहरू काम को निर्माता प्रशंसा, र उहाँलाई कलाकारहरूको प्रचार गर्ने समाज द्वारा सञ्चालन प्रदर्शनी मा दोस्रो स्थानमा पुरस्कृत गरियो। खैर, त्यसपछि Shishkin सिर्जना जित्यो, तर यो त महत्त्वपूर्ण छैन। धेरै महत्त्वपूर्ण कम्पनी साँचो masterpieces सिर्जना गर्न सक्ने Fyodor दुर्लभ प्रतिभा मा देखेको छ कि छ (चित्रहरु Vasileva हाम्रो वर्णन "भिजेको Meadow" यो विचार प्रमाणित गर्छ)।
केही समय क्यानभासमा कलाकार, पुरातत्व एक घनिष्ठ मित्र राखिएको थियो। त्यसपछि एक तस्वीर ड्यूक निकोलस किन्न चाहन्थे, तर यो अगाडि थियो , पावेल Tretyakov। यो Tretyakov ग्यालेरीमा, त्यहाँ थियो, र तस्वीर आज छ। फेडोरा Vasileva लागि जाँदा उहाँले आफ्नो कृति उत्तरी मात्र एक वर्ष बसे सिर्जना गरेपछि थियो। कलाकार कामहरू मा पूर्ण आफु थकित, लामो र मेहनत गरे। स्वाभाविक, यो छैन रिकभरी लागि अनुकूल छ, र सेप्टेम्बर 1873 को अन्तसम्ममा Vasilyev अर्को संसारमा भयो।
कसरी हास्य पुस्तक आकर्षित गर्न: एक phased विवरण
भूमिकाको अभिनय - यो के हो?
आलु र मशरूम संग स्वादिष्ट पकौडी
महिला मा धमनी उच्च रक्तचाप